Imimmisele yenkonzo - PDF.to
Ngezantsi inguqulelo enzima yemigaqo yethu yeenkonzo yesiNgesi kunye nenqubomgomo yobumfihlo ye- english yemimiselo yomthetho isetyenziswa kuphela kwisiNgesi kuphela
Ngokufikelela kwiwebhusayithi kwi- https: //pdf.to , uyavuma ukuba ubophelelwe yile migaqo yenkonzo, yonke imigaqo nemimiselo efanelekileyo, kwaye uyavuma ukuba unembopheleleko yokuthotyelwa kwayo nayiphi na imithetho efanelekileyo yendawo. Ukuba awuvumelani naliphi na le migaqo, awuvumelekanga ukusebenzisa okanye ukufikelela kule sayithi. Izinto ezikule website zikhuselwe ngumthetho we-copyright kunye nomthetho werhwebo.
Imvume inikezelwa ukukhuphela okwesikhashana ikopi enye yezinto (ulwazi okanye software) kwi-website ye-Pdf. Oku kunikezelwa kwelayisenisi, kungekhona ukudluliselwa kwesihloko, kwaye phantsi kwelayisenisi awukwazi:
uzame ukuhlaziya okanye ukubuyisela injini nayiphi na isofthiwe esilunxweme kwi-website yePdf.
ukususa nayiphi na ilungelo lobunikazi okanye ezinye izibhengezo zokuthengisa ezivela kwizinto eziphathekayo; okanye
ukudlulisela izinto kumnye umntu okanye 'kwisibuko' izinto kwiyiphi na enye iseva.
Le layisenisi iya kuphelisa ngokuzenzekelayo ukuba uyaphula nayiphi na yale miqobo kwaye inokupheliswa yi-Pdf. Kunanini na. Xa ugqiba ukujonga kwakho kwezi zinto okanye ekupheliseni le layisenisi, kufuneka utshabalalise nayiphi na impahla ekhutshweyo kwifa lakho ukuba ingafowuni okanye ifomathi.
Izinto ezikwiphepha lewebhu lePdf zibonelelwa 'njengokuba'. I-Pdf.to ayinakuqinisekiswa, ayichazwe okanye ayichaphazelekileyo, kwaye ngoku ke ayayilahla kwaye ayigxininise zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle kokunciphisa, zichazwe ngemvume okanye imimiselo yokuthengisa, ukufaneleka kwintsikelelo ethile, okanye ukungaphuli kwepropathi yolwazi okanye ukuphulwa kwamalungelo.
Ukongeza, i-Pdf.to ayifuni okanye iyenze nayiphi na imiba malunga nokuchaneka, iziphumo ezibonakalayo, okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezixhobo kwiwebhusayithi yayo okanye ngokubhekiselele kwizinto ezinjalo okanye nakwephi na isayithi ezixhomekeke kule sayithi.
Akukho mcimbi uza kuba yi-Pdf.to okanye abathengi bayo bahlawuliswe nayiphi na umonakalo (kubandakanywa, ngaphandle kokunciphisa, umonakalo wokulahlekelwa kwedata okanye inzuzo, okanye ngenxa yokuphazamiseka kwezoshishino) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izinto kwiPdf. kwiwebhusayithi, nangona i-Pdf.to okanye i-Pdf. kummeli ogunyazisiweyo uye waziswa ngomlomo okanye ngokubhaliweyo malunga nokuba nomonakalo onjalo. Ngenxa yokuba ezinye iimbambano azivumeli ukulinganiselwa kwiimpawu eziqinisekisiweyo, okanye ukulinganiselwa kwemithwalo yemingcipheko efanelekileyo okanye engafanelekanga, le miqathango ingenakusebenza kuwe.
Izinto ezibonakala kwiwebsite yePdf zingabandakanya i-technical, typographical, okanye iipositi zephoto. I-Pdf.to ayifuni ukuba kukho naziphi na izixhobo kwiwebhusayithi yazo ezichanekileyo, ezipheleleyo okanye zangoku. I-Pdf.to ingenza utshintsho kwizinto eziqulethwe kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo iPdf.to ayenzi nantoni na ukuzibophezela ekuhlaziyeni izinto.
I-Pdf.to ayizange ihlaziye zonke iisayithi ezixhomekeke kwiwebhusayithi yayo kwaye ayikho uxanduva lokubhaliswa kweso siza esixhunyiwe. Ukufakwa kwanoma yiyiphi inxibelelwano akubhekiseli ukuvuma kwePdf. Ukusetyenziswa kwanoma iyiphi i-website enxulumene nelolu hlobo lusemngciphekweni womsebenzisi.
I-Pdf.to ingahlaziya le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le website uvuma ukuboshwa ngenguqu yangoku yale migaqo yenkonzo.
8. UMthetho woLawulo
Le miqathango neemeko zilawulwa kwaye zenziwe ngokuhambelana nemithetho yaseConnecticut kwaye ungenise ngokungenakuqondiswa kummandla othe wodwa weenkundla kuloo Mbuso okanye kwindawo.
Abathathi-nxaxheba bePDF.to iinkonzo zokulayisha, ukuguqula, ukufikelela kunye nokusebenzisa izixhobo kunye neenkonzo ngomngcipheko wazo. IPDF.to ayiwuqwalaseli umxholo wabathengi IPDF.to ayizukuba nabutyala kuwo nawuphi na umonakalo obangelwe ngenxa yeenkonzo zePDF, ulwazi, okanye iimveliso. Umthathi-nxaxheba ngamnye uxanduva lwezinto zonke ezigcinwe ngePDF.to, ngokuchaneka kwezixhobo kubandakanya iiwaranti, kunye nokufumana lonke ugunyaziso oluyimfuneko lwezixhumanisi kunye nezinto zokuthengisa. I-PDF.to ayenzi kwaranti ecacileyo okanye ebekiweyo malunga nokuchaneka, umgangatho, okanye uhlobo lolwazi olunokufunyanwa ngabasebenzisi okanye abathathi-nxaxheba kwi-intanethi ngokusebenzisa iinkonzo zePDF.to.
Nceda uqaphele ukuba konke ukulayishwa komsebenzisi kunye nomxholo kuyacinywa ngaphakathi kweeyure zokulayisha, kwaye uguquko lwazo lucinyiwe ngaphakathi kweeyure ezingamashumi amabini anesine, ngengqondo kuphela kugcino lwexeshana
Ukuba uyakholelwa ukuba naziphi na izinto ezikwiPDF.zophula ilungelo lobunini onalo okanye olilawulayo, ungathumela iSaziso esibhaliweyo soTyeshelo lweLungelo lokushicilela ("Isaziso") kuMmeli wethu we-Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Ummeli ochongwe apha ngezantsi . Kwisaziso, kufuneka:
(A) Chonga ngokweenkcukacha ezaneleyo umsebenzi onelungelo lobunikazi okanye ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda obanga ukuba uphuliwe ukuze sikwazi ukufumana le nto;
(B) Chonga i-URL okanye enye indawo ethile kwiPDF.oqulethe izinto ozibanga ngathi ziphula ilungelo lakho lokushicilela;
(C) Nikezela ngesiginitsha ye-elektroniki okanye ebonakalayo yomnini welungelo lokushicilela okanye umntu ogunyazisiweyo ukuba enze egameni lomnini;
(D) Faka ingxelo yokuba unokholo oluqinisekileyo lokuba ukusetyenziswa kwempikiswano akugunyaziswanga ngumnini welungelo lokushicilela, iarhente yakhe, okanye umthetho;
(E) Faka ingxelo yokuba ulwazi oluqulethwe kwiSaziso sakho luchanekile kwaye ungqina phantsi kwesigwebo sobuxoki sokuba ungumnini welungelo lokushicilela okanye ugunyazisiwe ukuba wenze egameni lomnini welungelo lokushicilela; kwaye,
(F) Faka igama lakho, idilesi yokuthumela, inombolo yefowuni kunye nedilesi ye-imeyile.
Ungasithumela iSaziso sakho kuMmeli weDMCA othunyelweyo nge-imeyile, ifeksi, okanye ngeposi njengoko kubekiwe ngezantsi:
Isitalato i-411 S. Sangamon
Xa iPDF.to ifumana iSaziso esifanelekileyo, isusa ngokukhawuleza okanye ikhubaze ukufikelela kwimathiriyeli ephula umthetho kwaye iphelise iiakhawunti ezinxulumene noko (ukuba kufanelekile) ngokwe-DMCA.
IPDF.to yamkele umgaqo-nkqubo wokupheliswa, kwiimeko ezifanelekileyo nangokubona kwayo, amalungu athatyathwa njengabaphuli-mthetho abaphindayo. I-PDF.to inokuthi, ngokokubona kwayo, inyanzelise ukufikelela kwiPDF.to kunye / okanye ukuyekisa ukusetyenziswa kwayo nangubani na owaphula amalungelo abanye abantu epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, nokuba akukho kuphinda kuphindwe ukwaphulwa.
PDF kwi Excel
PDF kwi CSV
I-DOCX ukuya kwiPDP
I-Excel ukuya kwi-PDF
I-XLS ukuya kwiPDP
XLSX ukuya kwiPDP
JPG ukuya kwi-PDF
PNG ukuya ku-PDF
I-PPT ukuya kwi-PDF
I-PPTX ukuya kwiPDP
Isicatshulwa esiya kwiPDP
ePub ukuya kwiPDF
ICO ukuya kwiPDF
BMP ukuya kwiPDP
SVG ukuya kwiPDP
Zixhobo ze PDF
Lungisa i PDF
Cima iphepha lePDF
253,647 guquka ukususela ngo-2019!
Qhagamshelana nathi - Ngathi - API - umthetho wabucala - Imimmisele yenkonzo - Twitter
Ugqithile kumda wakho wokuguqula kathathu ngeyure, unokuguqula iifayile zakho zibe 59:00 okanye ubhalise kwaye uguqule ngakumbi ngoku.
Ukuba yi-Pro kukunika ezi mpawu
☝ Ukuguqulwa okungathintelwanga
🚀 Impawu zesicelo soKhetho
Ukulungiswa kwebatch kufumaneka kubasebenzisi bePro kuphela. Phucula ngoku ukucubungula iifayile ezininzi ngexesha elinye.
Fumana ukufikelela okungapheliyo okanye zama ifayile enye